Fotoam-pitsaràna Iray Manantantara Ho An’ireo Vehivavy Ao Goatemalà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2016 6:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Ελληνικά, Español
Ao Goatemalà, mbola velona hatrany ny ratra navelan'ny fifandonana mitam-piadiana teo anelanelan'ny 1982 sy 1983, ary mikatsaka ny rariny ireo mibaby azy ireny. Sary notsongaina tao amin'ny kaonty Flickr an'i Surizar. Nampiasàna lisansa Creative Commons.
Ny 1 Febroary lasa teo no nisokatra ny fotoam-pitsaràna iray manan-tantara tao Goatemalà. Sambany tokoa izao no nisy fotoam-pitsaràna nosokafana momba ny fanolànana sy ny fanandevozana ara-nofo nandritry ny ady mitam-piadiana tao amin'io firenena io. Vehivavy iraika ambinifolo avy amin'ny vahoaka maya-q'eqchi’ no mitady amin'ny alàlan'io hetsika io ny rariny ho fanamelohana ireo miaramila tomponandraikitra tamin'ireo herisetra ara-nofo sy fomba fitondra tsy mendrika ny maha-olombelona, feno habibiana ary manambany natao azy ireo nandritra ilay fifandonana anatiny teo anelanelan'ny 1982 sy 1983.
Araka ny Prensa Comunitaria, lazain'ny tatitry ny Kaomisiona ho fitondràna fanazavàna ara-tantàra ny fanitsakitsahana zon'olombelona ao Goatemalà fa nandritra io vanimpotoana io dia :
tsy maintsy nifandimby ireo vehivavy nanasa ny fanamiana sy nikarakara nahandro ho an'ireo miaramila, tsy nandray karama na kely aza, ary mbola niharan'ny fanolànana imbetsaka aza. Nampiasain'ny tafika io herisetra ara-nofo io ho toy ny fitaovana hifehezana ireo vehivavy rehetra tanaty fikambanana noheveriny ho toy ny «fahavalo» na « mety hanelingelina ny rafitra napetraka», satria araka ireo fijoroana vavolombelona nataon'ireo vehivavy, maro tamin'ny vadin'izy ireo, anadahy na havana akaiky no tanaty fikambanana ary nitolona ho amin'ny zon'izy ireo hànana tany. Takatra avy amin'izany fa natao ankeriny ireo vehivavy mba « hanasaziana ny lehilahy » izay nitaky ny zony sy [mba] hampihorohoroana ny vahoaka.
Ny fanandevozana ara-nofo sy asa an-trano voalaza eto dia nitranga tany amin'ireo tobin-tafika napetraka tany amin'ny vondrom-piarahamonina Sepur Zarco, tany El Estor, any amin'ny Franja Transversal del Norte. Ireo lehilahy nampangaina ho nitarika na namela azy ireny hitranga dia ny kolonely Esteelmer Francisco Reyes Girón sy ilay kaomisera miaramila fahiny, Heriberto Valdez Asig, izay nampanantsoina hiatrika ireo heloka an'ady iampangàna azy.
Afaka vakiana izao manaraka izao ao anatin'ny fampitàm-baovao navoakan'ny Mujeres Transformando el Mundo [MTM, Ireo Vehivavy Manova Ny Tontolo], iray amin'ireo fikambanana mitory :
Noho ny fahasahian'ireo vehivavy ireo sy ny asa tsy nikelezany aina nataon'ny Mujeres Transformando el Mundo nandritry ny enina taona mahery tao anatinà disadisa stratejika iray, dia atrehantsika ankehitriny ny tranga iray miavaka, miaraka amin'ny akony goavana manerantany, satria io no fotoam-pitsaràna voalohany indrindra amin'io karazany io nojeren'ny rafi-pitsaràna eto amin'ny firenena. Ho ohatra ihany koa amin'ny fampiharana ny lalàna miaraka amin'ny fomba fijery ny maha-lahy na vavy io, izay mampibaribary ireo tsy fitoviana ara-tantara sy ny fitohizan'ny herisetran-dehilahy manjo ny vehivavy, indrindra ao anaty vanim-potoana toy ny ady an-trano mitam-piadiana.
Hatramin'ny 2009, dia nanangana ny vovonana ho amin'ny fanapahana ny fahanginana sy ny tsimatimanota ny Mujeres Transformando el Mundo, miaraka amin'ny Fikambanana Nasionalin'ireo Vehivavy Goatemalteky (Unamg ny fanafohezanteniny amin'ny teny Espaniola) sy ny Tarika mpanao fanadihadiana eny anivon'ny vondrom-piarahamonina ary ny asa fitaizana ara-tsaina sosialy (Ecap), mba hanomezan-tànana ireo vehivavy goatemalteky amin'ny zotran'izy ireo hitaky ny rariny.
Araka ny pejy Facebook-n'i Juicio Sepur Zarco, ireo vehivavy sisa velona tao Sepur Zarco « dia vonona ny hitondra hatramin'ny farany ity fotoam-pitsaràna ity ary hahita fanamelohana. »
Ny feon'izy ireo any akaikin'ny fiafaràn'ity lahatsary manaraka ity no maneho ny tanjaka sy ny fikirizan'izy ireo :
[…] Tsy mba afaka nilaza izay tiako notenenina aho.
Fa androany, faly satria tafita aminà dingana hafa izahay.
Fa, amin'izao fotoana izao, tsy làlana mahatahotra intsony ho ahy.
Tonga ankehitriny ny fotoana hitenenana sy hiresahana. Aoka hitsahatra ny fiaretana ny zavatra rehetra niaretanay.
Mba tsy hiaritra izay niaretanay intsony ny zafikeliko, sy ireo vehiavy hafa.
Faly aho androany fa neken'ny mpitsara ny marina nentinay notantarana taminy.
Nitsangana izahay. Nitanjozotra ary nandeha nitaky ny rariny.
Tsy isalasalàna fa io fotoam-pitsaràna io no vavolombelon'ny fahasahiana goavan'ireo vehivavy q'eqchie's. Araka ny anipihan'ilay goatemalteky mpanao gazety sady mpikatroka mpiaro zon'olombelona azy, Iduvina Hernández:
[…] Na eo aza ny holatra ara-tsosialy, na eo aza ny hirifiry sy ny henatra, ireo vehivavy ireo, tena ‘orkidea vy’ tokoa, dia nijoro tamin'ny tongony tsy nihozohozo ary nampitraka ny lohany tao anaty firaisankina nombam-pahamendrehana. Hivoaka ho mpandresy izy ireo satria tsy nahavita nampitanondrika azy ireo ny herisetra nampiharina tamin'izy ireo. Nitambatra izy ireo, toy ny iray izy rehetra, fo iray, hifampizara ny sakafon'ny fetin'ny rariny izy ireo, ary amin'ny farany, hipetraka manodidina afondasy tokana (chire jun chi xam) sy eo anoloan'ny kaopy tokana mba hifampizara ny zava-pisotron'ny fahamendrehana.
Araho amin'ity rohy ity ny fizotry ny fotoam-pitsaràna .
Ireo fanavaozana ny vaovao momba ilay fotoam-pitsaràna dia azonao raisina ihany koa ao amin'ny pejy Facebook-n'i Juicio Sepur Zarco/Vovonana hanapahana ny fahanginana sy amin'ny kaonty Caso Sepur Zarco.